Himalaya Dainik » ९ कक्षामा पढ्ने जीवनले बनाए वाईफाई भन्दा सय गुणा छिटो चल्ने ‘लाईफाई’
९ कक्षामा पढ्ने जीवनले बनाए वाईफाई भन्दा सय गुणा छिटो चल्ने ‘लाईफाई’
गोरखा माबि तुलसीपुरमा कक्षा ९ मा पढ्ने जीवन बोहराले बनाएको प्रबिधिको बारेमा दर्शकहरुलाई भन्दैथिए “ईन्टरनेट चलाउँदा वाईफाई जति छिटो चल्छ, त्यो भन्दा एकसय गुणा छिटो चल्छ ‘लाईफाई’ !
तुलसीपुर ६ बरुवागाउँमा रहेको उक्त बिद्यालयमा अध्ययनरत बोहराले आफेले बनाएको उक्त प्रबिधि हेर्न कार्यक्रममा निकै घुइँचो थियो । किनकी उनले अरु भन्दा अलि नयाँ प्रबिधि बनाएका थिए। लामो संघर्ष पछि उनलेे यो प्रविधि बनाएर नयाँ नाम दिएका थिए ‘लाईफाई’ !
एयरफोनमा बजाएको कुरा लाईट मार्फत सोलार प्यानलमा कलेक्सन हुने र त्यहाँ कलेक्सन भएको कुरा स्पिकरबाट बाहिर जाने बताए । यही प्रबिधिबाटै ‘लाईफाई’ मार्फत एकसय गुणा छिटो नेट चलाउन सकिने उनको प्रक्रिया सुनेर सबैजना छक्क थिए ।
उनले बिद्यालयमा पढेको केही कुरा र ईन्टरनेटमा हेरेर केही कुरा सिके अनी ब्यबहारमा उतारे । पछिल्लो समय निजि बिद्यालय घोकन्ते बनिरहेको भन्ने गुनासो बढिरहेका बेला गोरखा स्कुलका बिद्यार्थीहरुले देखाएको कलाले ब्यबहारिक र सीपको बिकास पनि गरेको पुष्टि हुन्थ्यो ।
स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेर बनाएका सामग्रीदेखि बाढी आउँदा बत्ति बल्ने प्रबिधि बिद्यार्थीहरुले बनाएर पदर्शनमा राखेका थिए । कक्षा ६ का दीपक केसी, सिद्धार्थ जिसी तथा बिनोद जिसीले बनाएको नदीमा पानीको बहाव बढेपछि आफै बक्ति बल्ने प्रबिधि हेर्ने हरुको घुइँचो पनि उत्तिकै थियो, भने कक्षा ६ का सुदीप वलीले बनाएको आकेशे पानीलाई संचय गरेर बिरुवाको आबश्यकता अनुसार स्वचालित रुपमा सिंचाई गर्ने प्रबिधिहरु मनपराउने पनि थुप्रै थिए ।
गोरखा स्कुलको ८ औं बार्षिकोत्सवमा सहभागि अभिभावक हरु पनि आफ्ना छोराछोरीले बनाएका यस्ता प्रबिधि देख्दा निकै खुसी देखिन्थे ।